Wondershare UniConverter: Bulk Video Trimming, fiovam-po, Compression, ary Optimization | Martech Zone
Satria miara-miasa amin'ny fenitry ny horonan-tsary am-polony ny mpivarotra - avy amin'ny karazana fisie ho an'ny navigateur isan-karazany, ny refy ho an'ny fantsona samihafa, ary ny famatrarana ho an'ny streaming tsara indrindra, ny miasa amin'ny alàlan'ny sehatra fanitsiana horonan-tsary hamoahana ireo rakitra ilaina dia mety ho mampatahotra. Ny vokatra tsara indrindra sy mora indrindra niasako tamin'ny fanaovana izany dia Wondershare UniConverter.
Ohatra, ny orinasako dia mampiasa a Shopify Plus fitehirizana ho an'ny mpanjifa lamaody amin'izao fotoana izao ary nasainay nampiditra horonantsary fohy momba ny vokatra tsirairay ao amin'ny tranokalany izy ireo. Nahafinaritra ilay horonan-tsary manta, saingy nila nanova ny habeny, nanery ary nanova ny horonan-tsary ho endrika MP4 izahay mba hampidirana haingana ao amin'ny Shopify. Miaraka amin'ny horonan-tsary an-jatony, izay mety ho naka andro mampiasa fitaovana fanovana… fa amin'ny Wondershare Video Converter, dia afaka nanangana ny filaharana sy ny ampahany fotsiny Output rehetra ilaina lahatsary antontan-taratasy ao anatin'ny dingana iray!
Nampiasa an'ity sehatra ity ihany koa aho hamadika sy hamoahana ireo karazana fisie horonan-tsary ilaina ho an'ny karazana navigateur tsirairay, anisan'izany MP4, WebM ary OGG.
Ny lisitr'ireo endri-javatra tafiditra amin'ny Wondershare dia miitatra mihoatra noho ireo asa ireo, na izany aza. Miaraka amin'ny logiciel dia afaka:
Lahatsary niova fo betsaka - Miova fo amin'ny endrika mihoatra ny 1,000, ao anatin'izany ny GIF animé (avy amin'ny horonan-tsary na sary).
Video Compress Bulk - Ahena hatramin'ny 90% ny haben'ny rakitrao amin'ny fitazonana ny kalitao sy ny famahana ny vokatra.
Lahatsary Fanovana betsaka - Tapaho sy amboary ny horonan-tsary, ampio dikanteny, ampio marika rano, ampio vokatra, amboary ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary, ovay ny metadata, na amboary feo.
Vidéo mitambatra betsaka – Atambatra ho iray ny horonan-tsary maromaro… Ohatra: Ampio intro na outros betsaka.
Horaketana horonantsary - Raketo efijery maro, ampiasao ny webcam ary ampidiro feo hafa.
Play Video - Milalao HD, Full HD, 4k, 8k, na DVD miaraka amin'ny mpilalao horonantsary.
Misintona horonan-tsary an-tserasera - misintona horonan-tsarimihetsika manontolo, tehirizo amin'ny endrika rehetra, na miova ho MP3 mihitsy aza.
Handoro Videos - Handoro horonan-tsary amin'ny DVD, mandoro peo DVD amin'ny CD, mandika DVD, na manova DVD amin'ny vokatra rehetra.
Wondershare UniConverter dia misy ho an'ny Windows sy Mac OSX. Ity misy topimaso momba ny logiciel:
Ny sehatra ihany koa dia manana endri-javatra fanampiny fanampiny famandrihana manokana ho an'ny Mac OSX:
Watermark Editor - asio mari-pamantarana lahatsoratra na sary amin'ny horonan-tsaryo
Background Remover - esory ho azy ny fiaviana amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy (AI)
Subtitle Editor - mamorona sy amboary ny dikanteny (habe, endritsoratra ary loko).
Smart Trimmer - tapaho amim-pahendrena ny horonan-tsary mampiasa AI
Auto Reframe ho an'ny Mac - amboary ho azy ireo horonan-tsary ho an'ny sehatra tsirairay.
Intro na Outro Editor - ampio betsaka intro na outros amin'ny horonan-tsaryo
Vidio Wondershare UniConverter
Fampahafantarana: Mpankafy ny sehatra aho ary mampiasa ny rohy mifandraika amin'ny Wondershare UniConverter ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: ampio betsaka ny mari-pamantarana videohoronan-tsary compresse betsakabulk niova fo lahatsaryhoronan-tsary fanitsiana betsakahoronan-tsary manambatra betsakavideo fampidirana betsakafitantanana lahatsary betsakabulk video outromac osmac osxMacOSMOVMP4OSXuniconverterfamatrarana horonantsaryVideo conversionvideo mitambatraboaty fitaovana videowebmam-baravarankelywindows bulk video editorfahagaganaWonderhare uniconverter
Fiheverana 5 rehefa misafidy fitahirizana rahona mba hanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny vokatra
Mpanonta: Mila Ho faty ny Paywalls. Misy fomba tsara kokoa hahazoana vola